Zoma 9 Aprily 2021
Fiangonana Noho ny fanitarana ny fikambanana katolika sy ny fitomboan'ny fizahan-tany any amin'ny nosy Samui, Suratthani. Ny fanampiana ny fanampiana ivelan'ny fiangonana Kristiana dia noforonina tamin'ny endrika fitambatra tanana amin'ny elatra mivavaka, elatra Angle ary taratry ny Fanahy Masina. Toerana anatiny, fiarovana toy ny ao an-bohon-dreny. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny jiro lava sy tery tsy misy ary ny elatra vita amin'ny konkretika be dia be vita amin'ny alàlan'ny jiro tsy voahaja dia namboarina hamorona aloka izay tsy miova amin'ny fotoana ary mihazona ny fiononana anatiny. Manamaivana ny haingo an'ohatra sy ny fampiasana fitaovana voajanahary ho fandriam-pahalemem-panahy eo am-bavaka.
Alakamisy 8 Aprily 2021
Trano Fonenana Ny trano fonenana dia mampiasa aestetika maoderina rehefa mitazona tokotany afovoany, izay mamono ny fomba nentim-paharazana Koesiana amin'ny fananganana trano. Eto dia avela manaiky ny taloha sy ny ankehitriny ilay trano fonenana, tsy misy fifandonana. Ny fampitaovana rano amin'ny làlan'ny varavarana lehibe dia mivoaka ny fivoahana, ny gorodona amin'ny fitaratra valin-drihana dia manampy hatrany ireo habaka misokatra kokoa, ahafahan'ny mpampiasa mandeha eo an-tokotany sy anatiny, taloha ary ankehitriny, tsy mazoto.
Alarobia 7 Aprily 2021
Talata 6 Aprily 2021
Alahady 4 Aprily 2021
Ny Kafe Namaly fohifohy momba ny aestetika maoderina, madio, aingam-panahy avy amin'ny alàka hazo hazo nampiasaina tamin'ny endrika abstract. Mameno ny habaka ny takelaka, mamorona endrika mirehitra sy sahala amin'ny zohy, saingy vokarina avy amin'ny endrika endrika tsotra sy mahitsy. Ny vokatra dia traikefa amin'ny fahadiovana sy voafehy. Ny famolavolana malina koa dia manamafy ny habaka voafetra amin'ny alàlan'ny fanodinana ireo fiasa azo ampiharina ho lasa endri-javatra haingo. Ny jiro, kapoaka sy ny talantalana dia mandray anjara amin'ny foto-kevitra famolavolana sy sary fahitana.
The Cutting Edge Ny Fivarotam-Panafody Momba Ny Dispensing Asabotsy 18 Septambra
Cloud of Luster Trano Fampakaram-Bady Zoma 17 Septambra
Sberbank Headquarters Atrium Alakamisy 16 Septambra
Fiangonana Trano Fonenana Sofa Trano Fisakafoanana Seza Ny Kafe